OnePlus ga-ebido ekwentị na 5G tupu ngwụcha afọ | Gam akporosis
OnePlus ga-ebido ekwentị 5G tupu njedebe nke afọ
OnePlus na-arụ ọrụ ugbu a na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke atụmatụ ọhụrụ na-ele anya na njedebe nke afọ a. N'otu aka ahụ, ika na-arụ ọrụ na telivishọn mbụ ya, nke iji gbasaa onyinye ngwaahịa gị. Na mgbakwunye, n'oge mgbụsị akwụkwọ anyị nwere ike ịtụ anya ọhụụ ọhụrụ ya, 7T Pro, onye ụbọchị ngosi leaked ụbọchị ole na ole gara aga. Onye isi ụlọ ọrụ ahụ kwadoro ozi ọzọ dị mkpa.
Onye isi nke OnePlus kwadoro na ika lga-ebido ekwentị 5G mbụ ya obere oge. Tupu ngwụsị afọ ọ ga-abụ eziokwu na ahịa, dịka ekwenyelarị. Ya mere, anyị nwere obere ịmụ banyere ngwaọrụ a.
Ọ bụghị n'ezie nke mbụ, mana na nke a ọ ga-abụ nke mbụ OnePlus ga-ebupụta na ahịa mba ụwa. N'ihi ya, ọ bụ ihe dị mkpa igba egbe maka Chinese emeputa na nke a. Versiondị nke 7T Pro na njikọta 5G ga-abụ ihe nlereanya nke akara ndị China ga-ebido ọdịda a. Ọ bụ ezie na ọ nweghị ihe akwadoro maka ugbu a.
Ụlọ ọrụ ahụ mara na ha aghaghi itinye 5G na igwe ha, ka ha ghara ịhapụ ha. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ụdị na njedebe dị elu ahapụla anyị otu ma ọ bụ karịa ekwentị nwere nkwado maka 5G. Ya mere, akara ndị China ga-agbadakwa ịrụ ọrụ na nke a.
Ya mere, na ọdịda nke afọ a anyị ga-enweworị OnePlus na 5G dị n'ahịa mba ụwa. Obi abụọ adịghị ya, ọ na-ekwe nkwa ịbụ ekwentị na-ewepụta mmasị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ nwere ọnụahịa dị ọnụ ala, na-atụle ọnụahịa ugbu a nke ekwentị 5G, nke dị mfe karịa 1.000 euro n'ọtụtụ ọnọdụ.
Enwere ma ọ dịkarịa ala ọnwa ole na ole ruo mgbe a ga-eweta ya na ọkwa. Ya mere, anyị ga-ege ntị na akụkọ gbasara ihe a maara banyere OnePlus a na 5G nke ika ahụ ga-ebido tupu njedebe nke afọ. Ọnụ ọgụgụ 5G ekwentị na-eto eto.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OnePlus » OnePlus ga-ebido ekwentị 5G tupu njedebe nke afọ